Olona efatra no voasambotra tamin’ny alakamisy 12 septambra teo noho ny resaka fivarotana rongony. Velon-taraina ny vahoakan’Ihosy amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina. Fantatra ary fa misy rangahy «Ralavasomotra » no malaza fa mpamatsy rongony eo an-toerana. Noho ny fiaraha-miasa amin’ny fokonolona sy ny polisy dia fantatra fa ao amin’ny fonkontany Ambaniandrefana akaikin’Ambatoara no monina Ralavasomotra ka tsy niandry ela fa avy hatrany dia nidina ifotony ny polisy. Tra-tehaka tao amin’ny trano iray izy niaraka tamin’ny namany telo hafa izay mpividy rongony ao aminy ary nahatrarana rongony iray bidon efa vonona hamidy sy rongony tapaky ny sachet roa izay mbola amin’ny tangozany ary rongony efa voafono maromaro.